Abahleli beSandi seSandi seMoto (MPSE) Ukunika imbeko kuMhleli oPhetheyo / uMyili oYilwayo weCece ngeBhaso lokuFezekisa uMsebenzi | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Abahleli bemifanekiso yesandi eshukumayo (MPSE) ukuHlonipha uMhleli oPhetheyo / uMyili oYilwayo weCece ngeBhaso lokuFezekisa uMsebenzi
I-2020 MPSE I-Gold Reel Amabhaso atyaliweyo ngoJanuwari 19, 2020.
ISixeko seStudiyo, eCarlifonia-Abahleli beSandi seMotion (MPSE) namhlanje babhengeza ukuba iyakuhlonipha Award Academy Award-Ukubeka esweni isandi somhleli weCecelia "Cece" Hall nge2020 MPSE Career Achievement Award Award. IHolo yafumana ukutyunjwa kwe-Oscar yokuhlela kwesandi kwi-1987 ngomsebenzi wakhe Top Gun uphumelele u-Oscar kwiminyaka emine kamva Ukuzingela kuka-Oktobha obomvu. Umongameli wangaphambili we-MPSE, usebenze iminyaka emininzi njengosekela mongameli ophezulu kwisandi semveliso yangemifanekiso eParamount imifanekiso kwaye ngoku ufundisa uyilo lwesandi e-UCLA. Uya kufumana iBhaso lokuFezekisa uMsebenzi kwi-67th Umnyhadala weeMbasa zeGolide ze-MPSE zeGolide Reel, ngoJanuwari 19, 2020 kwi los Angeles.
"I-Cece Hall yenye yeentsika zoluntu oluvakalayo," utshilo umongameli we-MPSE u-Tom McCarthy. “Ungumhleli onesandi esineetalente ezizodwa, owenze isandi esibonisa umfanekiso weefilimu ezininzi ezintle. Njengomphathi kwiParamount Pictures, wayengumntu ongakhathaliyo kubathengisi beefilimu kunye nabaculi abanesandi kunye neeprojekthi zabo. Njengomfundisi-ntsapho, uye waphefumlela kwaye wabelana ngolwazi lwakhe kunye namava akhe abantu abatsha abangenele kwimisebenzi efanelekileyo kwimveliso. Kuyasivuyisa ukubona igalelo lakhe eyahlukileyo kubugcisa bezandi bokuzonwabisa ngeMbasa yethu yokuFezekisa uMsebenzi. ”
Emva kokuqala umsebenzi wakhe wokuba ngumhleli wezandi ozimeleyo, iHolo yahlala kwiParamount imifanekiso kwi1978 njengomfazi wokuqala ukuqeshwa kwisebe lokuhlela izandi. KwiParount, wajonga isandi sefilimu kubandakanya Star Trek II & III, iBeverly Hills Cop I & II, Ingqina, ukukhangela uBobby Fisher kwaye Iintsuku zeNdudumo. Njengoko usekela-mongameli ophezulu wezandi zasemva kwemveliso, ukongamela iiprojekthi zombini eParamount kunye neenkxaso zayo kubandakanya Iiyure, Ukuphulukana nokuphelelwa, IWebhusayithi kaCharlotte, iNyoka eMnyama kwaye Hustle kunye nokuhamba. Endleleni, waphuhlisa ubudlelwane bentsebenzo kunye nabalawuli kunye nabavelisi kubandakanya uScott Rudin, uPeter Weir, uJerry Bruckheimer, uTony Scott, uTim Burton noJordani Kerner.
Ukongeza kuye Award Academy Award kuba I-Hunt ye-Red October, Iholo liphumelele amabhaso amabini ePalamente ye-MPSE eGolden Reel phakathi kwamagama alithoba. Waye wanyulwa njengo-Mongameli we-MPSE kwi-1984, owasetyhini wokuqala ukubamba kweso sikhundla. Usebenze kwikomiti elawulayo yesebe elivakalayo leZiko lobugcisa beMoto kunye neeNzululwazi iminyaka esixhenxe.
Kwi-1995, iHolo yamenywa ukuba ifundise kwisikolo i-UCLA Graduate School of Theatre, Ifilimu kunye neTelevishini / Imidiya kwaye ihlala inomdla wokufundisa uyilo lwesandi kwizizukulwana ezitsha zabenzi beefilimu. Uthathe indawo yokuhlala e-Savannah College of Art and Design (SCAD) kunye ne-California State University, Monterey, kwaye usebenze kwiiphaneli ezininzi kunye neesemina malunga noyilo lwesandi e-US nakwamanye amazwe.
“Ndiwongekile kwaye ndithobekile ukuba ndiqwalaselwe ngoontanga bam eMPSE,” utshilo uHall. “Ndinobudlelwane obude nombutho kwaye ndizibophelele kwisinjongo sayo ukukhuthaza abahleli bezandi kunye nobuchule bokuhlela isandi. Ndiyabulela ngomsebenzi wam owonwabileyo kwaye ndinelunda ngokufumana ithuba lokuqasha abantu basetyhini abanetalente kwiimuvi endizijongileyo. ”
I-MPSE Career Achievement Award Award ibona amagcisa avakalayo azenzele imisebenzi encomekayo njengomntu nomntu obenegalelo kubugcisa bezandi bokubonisa imiboniso bhanyabhanya, umabonwakude kunye nokudlala kunye nokumisela umzekelo wokubalasela kwabanye ukuba bawulandele. Iholo lijoyina uluhlu olwahlukileyo lwabahlaziyi bezandi, kubandakanya umamkeli weMpumelelo kwi2019 uStephen H. Flick, uJohn Paul Fasal, uHarry Cohen, uRichard King, Skip Lievsay, uRandy Thom, uLarry Singer, uWalter Murch noGeorge Watters II.
Yasekwa kwi-1953, abahleli bemifanekiso eshukumayo ye-Motion Picture ngumbutho ongajonganga nzuzo kwizandi zesandi kunye nabahleli bomculo abasebenza kumfanekiso oshukumayo, umabonwakude nomzi mveliso wokudlala. Injongo yombutho kukubonelela ngobutyebi bolwazi olusuka kwizifundo eziphumelele amabhaso kwiqela labantu abahlukeneyo, ulutsha kunye nabantu abafundela imisebenzi; ukufundisa nokufundisa uluntu malunga nokufaneleka kwezobugcisa kunye nenkqubela phambili yezobugcisa kulungiso lomculo kunye nomculo; ukubonelela ngemfundo yokuqhubela phambili ngenkqubela phambili yesandi sokufunda; kunye nokunceda ukuphucula ubomi bobuqu kunye nobungcali bamadoda nabasetyhini abasebenza obu buchule bodwa.
Izithuba ezandwendwe ngu-Artisans PR (ndinibone nonke)
I-1606 Studio kunye neNkampani yeCaruso yenza uManyano lobuchule - Oktobha 15, 2020
Ukunyuka kweMifanekiso yeLanga kunye neQela le-UNSA lokuQeqesha abasebenzi baseShishini laseOstreliya eliKhulayo - Oktobha 14, 2020
I-NAB bonisa iNew York Present Session kwiiNdlela zokuKhanya kunye nezeSandi ezisetyenziswa ku-Amy Seimetz's 'Uyafa Ngomso' - Oktobha 14, 2020
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Awards Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida ukuhlela Iimbasa zeGolide Reel UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli SJGolden - Isandi Imikhonto kunye neentolo IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji 2019-09-18
Previous: Usasazo lwePixs lwasasaza lweMveliso esekwe kwiLifu eMTE2019
next: Umncedisi wentengiso-Ixesha leXesha